दस रुपियाको नोट | मझेरी डट कम
त्यो कुनै विदाको दिन थियो। स्कूल जान नपर्ने हुनाले म यसै रल्लिरहेको थिएँ साविकको समयमा बिहानको भात खाएपछि। म कतै फुर्रर उड्ने ताकमा छु भन्ने मेरो मनोदशा बुझेर होला आमाले मलाई बजारबाट एक गु्रस सलाई किनेर ल्याउन अह्राउनुभयो। सलाईका बाह्रवटा बट्टा अथवा एक दर्जन बट्टाको एक प्याकेट र त्यस्ता बाह्रवटा प्याकेटको ठूला बन्डल वा पोकालाई ग्रुस भनिन्थ्यो। हामीले खुद्रा बिक्रीका लागि थोक मूल्यमा सरसामान किनेर ल्याउने शुभकरण मारवाडीको गद्दी पुरानो बजारमा सिंहदेवी चोकदेखि पाँच–छ घर तलतिर थियो। आमाको साथ लागेर अनगिन्ती पटक म त्यहाँ गइसकेको थिएँ। शुभकरण मारवाडीको त्यो थोक दोकान ग्राहकहरूको भीडले सधैँ छोपिएको हुन्थ्यो। भीड पातलो नहुन्जेल मैले उभिई–उभिई पालो कुर्नुपर्थ्यो। त्यही अनुभवले गर्दा पनि म एक्लै त्यहाँ सकेसम्म जान चाहन्नथेँ।
शिव सिनेमा नामको त्यो फिल्म हल चतरालाइनमा खुलेदेखि नै म सिनेमाको चकाचौधबाट मोहित भएको थिएँ। हलमा लागिरहेको फिलिमबारे त त्यो नहेरे पनि थाहा हुन्थ्यो। किनभने प्रत्येक दिन एउटा जीप धरान बजार घुमेर कागजका पर्चा छर्दै ढ्वाङ फुक्थ्यो। तर आगामी फिलिमबारे थाहा पाउन भने हलमा पोस्टर हेर्नै पुग्नुपर्थ्यो। फोटाका रूपमा फिलिमको 'प्रि–भ्यु' हेर्न पाइने विचारले मेरा गोडा हलुका भएका थिए भने हिँडाइको गति तीब्र।
अब म के मुख लिएर आमाको सामुन्ने जाने? मलाई राम्ररी थाहा थियो त्यस दस रुपियाँको महत्त्व। आमाले एक एक कन्ची जोगाउनुहुन्थ्यो र त्यसबाट नयाँ वस्तु खरिद गर्दै दोकानमा राख्नुहुन्थ्यो बिक्रीका लागि। एक गु्रस सलाईको दस रुपियाँ पर्दैनथ्यो, त्यसमा पनि केही रुपियाँ फिर्ता आउँथ्यो। एक आनामा एक गिलास चिया खान पाइन्थ्यो। सोह्र आनाको एक रुपियाँ हुन्थ्यो र नोट र रेज्की भा.रु.कै चल्थ्यो। राजा महेन्द्रको तस्बिर बोकेको पाँच–दस रुपियाँको नोट बजारमा देखिन थालेको खुबै भए डेढ–दुई वर्ष भएको हुँदो हो। मैले दस रुपियाँको सत्यानाश गरेकोमा आमाको क्रोध र क्लेषको म अनुमान गर्न सक्थेँ। मेरो लापरबाहीको काण्ड सुनेर टुरिस्टजस्तो कहिलेकाहीँ घरमा झुल्किने बाको कसिलो झापड पाउने डरले मलाई खुम्च्याएर झनै सानो बनाएको थियो। त्रासको तीब्र करेन्टले डामिएका राता गाला र ढ्याङ्ग्रोजस्तो धड्किरहेको मुटु लिएर म शिव सिनेमा हलबाट उल्टो खुट्टा त्यही बाटो भएर फर्किएँ जुन बाटो भएर म केही बेरअघि बेफिक्रीसाथ गएको थिएँ। तुरुन्तै फर्कंदा भुइँमा लडिरहेको फेला पर्छ कि भन्ने झिनो आश लिएर लगभग दौडन लागेँ। तर अहँ, बाटामा मानिसका पाइलाका डोबहरू थिए, दस रुपियाँको नोट थिएन। मलाई आमाले छन् छन् बज्ने कम्पनी रुपियाँ नदिएर त्यो महेन्द्रको फोटो भएको नोट किन दिनुभएको होला भनेर रिस पनि उठ्यो, तर गल्ती त मेरै थियो।
त्यहाँबाट रित्तो हात र रित्तो खल्ती लिएर घर फर्कने हिम्मत ममा रहेन। कहाँ जाउँ्क, कसकोमा शरण लिउँ्क भनी सोच्ने थालेँ। एक रात कतै गुजार्न पाए आमाको क्रोधको मात्रा घट्न सक्ने थियो र मैले पूर्ण माफी पाउन सक्ने थिएँ। तर आठ–नौ वर्षको लडाकाको सीमित र सानो संसारमा त्यस्तो आश्रयस्थल हुने कुरै थिएन। धरान बजारमा कोही आफन्त पनि थिएनन्। भएको एउटा मावली पनि धनकुटामा थियो अनि मलाई माया गर्ने बाजे–बज्यै पनि धनकुटामै। किंकर्तव्यविमूढ म मूल बाटोतिर नलागी त्यसको समानान्तर जस्तो रहेको खहरेको बगरैबगर हिँडेर आफू पढ्ने भगवती मिडिल स्कूलको चउरमा पुगेँ जहाँबाट घरको दूरी मुस्किलले एक सय मिटर हुँदो हो। तर धनकुटाको हाम्रो मूल घरमा बस्नुहुने बाजे–बज्यैको ध्यान आउनासाथ मलाई उहाँहरूको शरण पर्नु नै एक मात्र उत्तम उपाय होला भन्ने लागिसकेको थियो र मेरो भीरु हृदय त्यस विचारसित लहसिसकेको थियो।
खर्दुखोला तर्नुअघि खोलाछेउको बस्तीमा म केही बेर सुस्ताएँ। खोला तरेपछि चिउरीबासको उकालो सुरु हुन्थ्यो। त्यसैले म शक्तिसञ्चय गरिरहेको थिएँ र साथसाथै आफ्नो निर्णयप्रति पुनर्विचार पनि। सानैदेखि बा–आमा, बाजे, काकाहरूसँग साथ लागेर कैयन् पटक ओहोरदोहोर गरिसकेको धरान–धनकुटाको पैदल बाटो मेरा लागि नौलो थिएन। तर अरू बेलाझैँ न झोला बोकेको थिएँ न मसँग खाजा नै थियो। गोजी पनि रित्तो थियो र पेट पनि रित्तिँदै गइरहेको थियो।
बाटो सुनसान थियो। हामी दाहिनेपट्टिको पहिरो गएको डाँडाबाट आएको सानो तुरतुरे खोला तमोरमा मिसिने ठाउँनेर आइपुग्यौँ जहाँ बाटाछेउ दुई–तीन ओटा छाप्रा थिए र एउटा झ्याम्म परेको रूख थियो। टोली नेता बाटो छाडेर तमोरको किनारतर्फ लाग्यो। हामी उसकै पदचिह्न अनुसरण गर्दै गयौँ। कोशीको पानीले घरिघरि थपेडा दिइरहने एउटा ठूलो गोलढुङ्गामा उसले आफ्नो कुम्लो बिसाएर भन्यो―
“अब भात पकाउने केटा हो।”
ढुङ्गैढुङ्गाको त्यस बगरमा कसरी भात पकाउने होला? मेरो बुद्धिले त भ्याएन। न भाँडाकुँडा छ, न डाडुपन्यूँ, न दाउरा छ, न त ओदान। फेरि सामल–तुमल कहाँबाट ल्याउने?
अघिसम्म एक मात्र चिन्ता भोकको थियो। अब पेट भरिएपछि सुत्ने पीर एकाएक थपियो। उनीहरूले माया गरेर मलाई भात ख्वाएका थिए र फुच्चे सदस्यका रूपमा आफ्नो टोलीमा मलाई मिसाएका थिए। गर्लान् नि त केही उपाय भनेर अब मैले आफूलाई पूरै उनीहरूको निगाहामा छाडिदिएको थिएँ। बाटाछेउको पसलमा पो बास माग्छन् कि भन्ने लागेको थियो। तर उनीहरूले फेरि कुम्लो बाँधे र हिँड्ने सुरसार कसे। मलाई अचम्म लाग्यो― कहाँ जाने होलान् यिनीहरू? हामीले खाँदा भुकभुके साँझ परेको थियो। अब त निकै अँध्यारो भइसकेको थियो। तैपनि हाम्रो टोलीले त्यहाँबाट प्रस्थान गर्‍यो र पातलो जङ्गलको सानो खण्डलाई पार गरेपछि हामी तमोर नदीमाथि राणाकालमै बनेको फलामे झोलुङ्गे पुलमा थियौँ। नदी देखिन्नथ्यो, तर हाम्रा खुट्टामुनि तमोर गर्जनासाथ बगिरहेको थियो।
अब मलाई लाग्यो हाम्रो बास मूलघाटमा हुनेछ। मूलघाटमा चियाखाजा र भात खान पाइने पसलहरूको लस्करै थियो। तिनैमध्ये कुनै पसलको पिँढीमा बास हुने होला भन्ने मलाई लाग्यो। कोसीबाट वहने चिसो हावाले मलाई सेक्न लागेको थियो र दिनभरिको हिँडाइले थाकेको मलाई निद्रा पनि लाग्न थालेको थियो। तर मेरो अनुमान विपरित मूलघाटमा हाम्रो टोलीले बाँसको कप्टेराको मुठा पारेर त्यसको राँको बनाए अनि त्यसलाई बालेर हातमा लिई अघि बढे। हे भगवान्! त्यसभन्दा मास्तिर त बस्ती थिएन। कहाँ जान लागेका होलान् यिनीहरू? थपक्क बास नबसेर किन विरानतिर यिनीहरू बढिरहेछन्? म उनीहरूको भात र साथले दबिइसकेको थिएँ र उनीहरूको यात्रा योजना उपर प्रश्न गर्ने मेरो केही हैसियत थिएन।
अब हामी नाम मात्रको पुल्ठाको भरमा धनकुटे खोलाको बगरमा झर्‍यौँ। धनकुटे खोला केही तल तमोरमा मिसिन्थ्यो र त्यो दोभान धनकुटाका मरेका मानिसहरूको सद्गत गर्ने घाट पनि थियो। म भित्रभित्रै डर र आशङ्काले खुम्चिएर सानो हुँदै गइरहेको थिएँ। धनकुटे खोलामा हामी पुग्यौँ तर त्यसलाई नतरी हाम्रो टोली देब्रेपट्टिको बगर हुँदै अघि बढ्यो। मलाई कौतुहलमिसि्रत डरको पन्जाले गाँजिरहेको थियो। केही उत्तर गएपछि टोली नेता बायाँपट्टिको पाखो उक्लन थाल्यो। हामी पछिपछि लाग्यौँ र बगरभन्दा पच्चीस–तीस फिटमाथिसम्म परेको दुई मान्छे अग्लो ढुङ्गे ओडारमा हामी पुग्यौँ। अघि बोकेको बाँसका कप्टेरा र छेउछाउका झिक्रा मिलाएर आगो बाल्ने काम भयो। नजिकका सेउला भाँचेर भुइँ बढारियो। त्यहाँ मेरा सहयात्रीहरूले फेरि आ–आफ्नो कुम्ला फोए र त्यहाँबाट खास्टो र दरी निकाले। दरी भुइँमा ओछ्याइयो र पातला चेप्टा ढुङ्गालाई सिरानी बनाइयो। टोली नेताले मलाई डराउला भनेर बीचमा सुताउने उर्दी दियो। म उनीहरूको पसिना र मयल टाक्सिएर सिन्कीजस्तो गन्हाउने खास्टोको एकछेउ ओढेर ती तीन जनाको बीचमा घुसि्रएँ। धरानमा आमाले के सोचिरहनु होला भन्ने सोचेँ। आफूले गरेको बेमाख र अहिले ओडारको सुताइ कुन बढी थियो त्यसको तुलना गर्न खोजेँ। त्यही सोचाइको तानाबानामा अल्झिएर म कतिखेर फुस्स भएँ पत्तो भएन, भोलिपल्ट झिसमिसमा टोली सदस्यहरूले उठाउँदा मात्र एकैचोटि मेरा आँखा खुले।
धनकुटे खोलामा झरेर मुख धोइवरी घाम नझुल्कँदै हामी उकालो लाग्यौँ। रमिते डाँडा नपुगेसम्म यो उकालो बाटो जङ्गल भएर जान्थ्यो। अरू बेला धरानबाट बिहान सखारै हिँडेर यहाँ आइपुग्दा अपराह्नको चर्को घामले घुचुक्क र ढाडमा हान्थ्यो। यसपटक भने घामको प्रभाती किरणले बेलहारा डाँडा छँुदासम्ममा हामी टेकुनालाको उकालो चढ्दै थियौँ। त्यहाँबाट घुमाउने चौतारा दमसाइलो उकालीको चारपाँच फन्काजस्तो मात्र लाग्दथ्यो। मेरा लागि घुमाउने चौतारा पुग्नु र डाँडागाउँको घर पुग्नु हात्ती र हात्तीछाप चप्पलजस्तै थियो।
घुमाउने चौतारामा वर र पीपलका बडेमानका रूखका बीचबाट सिरवानीतिर जाने बाटाको दुवै छेउ खानेकुरादेखि चुरा–पोते र स्वास्नीमान्छेको कपालमा बाँध्ने वत्तु जडिएका राता फुर्काहरू बेच्ने दोकान भुइँमा फिँजाएर राखिएका हुन्थे। त्यहाँका पसलेहरूले पनि मलाई चिन्लान् भन्ने डर थियो। त्यसैले चौतारालाई फेर मारेर गएँ र पसलहरूभन्दा केही माथि पुगेर टोलीलाई पर्खिबसेँ।
अब मैले उनीहरूसँग विदा लिने बेला आइसकेको थियो। एउटा खोल्सा छेउबाट म दाहिनेपट्टि उकालो लाग्नुपर्थ्यो जहाँबाट हाम्रो घर मुस्किलले एक किलोमिटर हुँदो हो। मैले अप्ठेरो मान्दै म छुट्टिनुपर्ने बताएँ। उनीहरूले मलाई 'राम्ररी जाऊ है नानी' भने। 'बाई, थ्याङ्क यु' वा 'नमस्ते' भन्न सिकेकै थिएन। अंकलको साइनो लाउन पनि जानेको थिएन। उनीहरू कहाँबाट आएका थिए र कहाँ जान हिँडेका थिए त्यो पनि मैले सोधिनँ। तर अन्तरहृदयमा म उनीहरूप्रति अनुगृहीत थिएँ। उनीहरूको साथ नपाएको भए म के खाँदो हुँ? कहाँ बास बस्दो हुँ?
अघिसम्म हराएको दस रुपियाँ नोटको चोट थियो, जसका कारणले मैले त्यसरी भाग्ने निर्णय गरेको थिएँ। अब अर्को डर थपियो, कुसमयको मेरो आगमनप्रति मेरा बाजेबज्यैको प्रतिक्रिया कस्तो होला? यही सोच्दै म घरतर्फ उकालो लागेँ।
भन्दै छ रोजै तेरो र मेरो
ऊ नजिक पनि त छैन